Shirdoon oo ka xumaaday xukunka saxafigii 'dacwadda kufsiga' - Sabahionline.com
Shirdoon oo ka xumaaday xukunka saxafigii 'dacwadda kufsiga'
Ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya ayaa Axaddii (3-dii Maarso) waxa uu maxkamadda racfaanka ku bogaadiyay sida ay u baabi'isay xukunka gabadhii la sheegay in la kufsaday Luul Cali Cismaan, laakiin waxa uu sheegay in uu ka xumaaday go'aanka ay ku sii xajisay xabsiga saxafi Cabdicasiis Cabdinuur Ibraahim.
'Dacwadda kufisga' bilayska oo bilaabatay xilli ay hoggaamiyayaasha Soomaaliyana ay ka jawaabayaan dhalleecaynta caalamka
Maxkamad Soomaali ah oo sii deeysay gabadhii la sheegay in la kufsaday saxafigiina xabsiga ku sii heysay
Maxkamad Soomaali ah oo mudo hal sano ah xidhay dhibane la sheegay in la kufsaday iyo wariye
"Waxaan ku faraxsanahay in aan arko go'aanka ay maxkamadda racfaanku ka gaartay dacwaddii dhibbanihii kufsiga waxaanan rumaysannahay in aan ku dhawaannay in caddaalad la sameeyo," ayuu Shirdoon ku yiri hadal uu soo saaray. "Si kastaba ha ahaatee, waxaan rajaynayay in saxaafigana laga gaaro xukun ka duwan kan la siiyay. Waan la socdaa in xukunkiisii hoos looga soo dhigay 12 bilood lagana dhigay lix bilood, laakiin ma rumaysni in saxafiyiinta lagu xiro in ay shaqadooda guttaan."
Bishii hore, ayaa Cismaan iyo Ibraahm waxaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah taaso oo ay ku muteeysteen xad-gudub ay ku sameeyeen hay'ado dawli ah. Ibraahim ayaa sidoo kale lagu helay in uu "qaaday waraysi been ah iyo in uu galay guriga haweeneey uunan ninkeeda joogin".
Shirdoon waxa uu ku celiyay in uunan ku farxin caddaalad darradii maxkmadayntii hore, laakiin waxa uu sheegay in ay waajib tahay in garsoorka la siiyo wakhti uu ku horumaro illaa uu ka gaaro heer uu si macno leh u shaqeeyo.
"Si kastaba ha ahaatee si le'eg sida ay noo soo jiidatay in ay baddasho xukunkii aan la soo dhaweeyn, ayay sidoo kalena waxa ay ahayd arrin aan marna munaasib ahayn in xukuumaddu faragalin ku sameeyso," ayuu yiri. "Waxannu ku jirnaa qorshihii aan ku kobcin lahayn mua'sasaad dawli ah oo laga hirgaliyo Soomaaliya, oo aan hunguriga lagu dhagin marka ay dhashaan."